लोक सेवा विशेष : मिति र पात्रोको हिसाब गर्ने तरिका « Nijamati Khabar
लोक सेवा विशेष मिति र पात्रोको हिसाब गर्ने तरिका
३) कुनै पनि वर्षको पछाडीको दुई अंकलाई ४ ले निशेष भाग जान्छ भने त्यो Leap Year हुन्छ । जस्तै: २००४, २००८,२०१२ आदी ।
४) शताब्दीहरुमा अगाडीको दुई अंकलाई ४ ले निशेष भाग गएको अवस्थामा त्यो शताब्दी Leap Year हुन्छ । जस्तै: २०००, २४००,१६०० आदी ।
७) हरेक वर्ष ३६५ दिनको हुन्छ । त्यसलाई ७ ले भाग गर्दा शेष १ बाँकी रहन्छ । Leap Year मा शेष २ बाँकी रहन्छ । त्यसैले Same day दिएर Year फरक पारेर Question दिएमा दिएको दुइ Year घटाउने र Leap Year संख्या जोडेर आउने संख्यालाई दिएको बार मा (+-) गरेमा सोधेको बार आउछ । जस्तै : २०१३ Jan 1 Sunday भएमा 2029 Jan 1 कुन बार हुन्छ ?
९) Same Year मा Month को Day फरक पारेर कुन बार भनेर सोधेमा दिएको अवधिमा कति दिन हुन्छ Count गरेर ७ ले भाग गर्ने आएको शेष दिएको बारमा (+-) गर्ने त्यो बार हुन्छ । जस्तै : 2013 Jan 24 Wednesday भए May 21 कुन बार हुन्छ ?
१०) Year र Month दुबै फरक पारेर दिएमा दिएको महिना विचको दिनको संख्या + दिएको Year विचको Difference + Leap Year को संख्याको योगलाई ७ ले भाग गरेर आउने शेषलाई दिएको बारमा (+-) गर्ने । जस्तै : 2013 Jan 10 Sunday भए 2015 Dec 10 कुन बार हुन्छ ।
११) पात्रो कुन Year को पात्रोसंग हुबहु मिल्छ भन्ने प्रश्नमा विचमा Leap Year कति परेको छ त्यसलाई दिएको दुई वर्ष घटाएर आउने संख्यासँग जोडेर ७ ले भाग गर्दा शेष ० भएमा त्यो वर्ष हुबहु मिल्छ । जस्तै : 2007 को पात्रो कुन वर्षको पात्रोसँग हुबहु मिल्छ ? a) 2013 b) 2015 c) 2018 d) 2020